Fisandratan’ny firenena : Tsy ekena intsony ny korontana -
AccueilRaharaham-pirenenaFisandratan’ny firenena : Tsy ekena intsony ny korontana
Noho ny fetin’ny paska, dia nisy ny fitaritan-tsaina izay nentin’ ny Filoham-pirenena ho tari-dresaka tamin’ny fandaharana fotoam-bita ny zoma lasa teo, nambarany tamin’ izany fa “ fandinihan- tena fibebehana marina no hanjaka anatin’ny tsirairay amin’ izao paska izao” teny fohy izay nentin’ ny filoha Hery Rajaonarimampianina . Mifanandrify indrindra amin’ ny fahatsiarovana ny tolona ny 29 martsa 1947 ihany koa ny vaninandro, ka anton’ ny nitarihan’ny Filoha ny famelabelarana ho amin’ izany tolona izay nataon’ ny mahery fo izany “ 71 taona ny tolom-pahafahana 29 mars 1947 , novelomina ny firaisainkina ho fisandratan’ i Madagasikara lohahevitra , tsy afaka mijanona amin ny lasa isika fa tsy maintsy mijery maka lesoka amin’ ny tantara. Malagasy miray hina manana fijery hiombonana no hanomezana toerana mendrika ireo mpiray tanindranaza lavo” hoy hatrany izy raha niresaka mikasika io tolom-panafahana io. Mitady ho very maina kosa anefa ny tolona hoy ny Filoha, ka tsy azo ekena izany noho ny fisian’ ireo mpanakorontana ny firenena amin’ izao fotoana “ilaina ny fanitsiana ny fanaovana politika izay mampizarazara ny malagasy loatra ny fandemen-tsaina entin’ ireo mpisehatra politika eto amintsika. Mila mailo ny vahoaka Malagasy, satria resahana ny korontana, ary ireo izay mamboly izany ihany no te hanomana ny fisainan’ny olona amin izany korontana izany. Tsy hanaiky izany intsony isika satria mampilentika ny firenena izany, ny voka- dratsiny dia rava ny firaisankina, samy maka ho azy ny mpiara-monina , misy ny minia mikimpy tsy mijery ny zava-bitan’ ny fitondrana , satria jamban’ ny fankahalana fotsiny sy ny halako bika tsy tiako tarehy” hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
Manoloana izany indrindra dia ilaina ny fanovana toe-tsaina araka ny fanazavana izay nentin’ ny filoha Hery Rajaonarimampianina hatrany “ Ilaina fandinihan-tena sy fijerena amin’ ny saina tsy miangatra ny zava misy. Izay no hanamafisako androana fa raha tsy misy ny firaisan-tsaina miroso mankany aloha, ary mitarika amina izany ny Filoha . Satria rehefa miray hina sy mitovy tanjona ny mpiray tanindrazana rehetra, dia ireny hitantsika misandratra haingana ireny ny firenena na aty afrika io na any amin’ ny firenena hafa. Nanana ny hambom-po pirenena avokoa ny vahoaka ao aminy, nanadino ny tsy fitovian-kevitra , mihavana anatin’ny firaisan-tsaina , io ilay antsoiko hoe hambom-po hiombonana miaraka amin’ ny toe-tsain’ ny fisandratana izay tokony hananantsika malagasy tsy ankanavaka . Na manana harena miavosa azy isika, dia tsy maintsy hanana io toe-tsaina io, ary hampisehoana amin’ny fihetsika andavanandro” hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Manoloana ny fandemen-tsena izay misy milaza fa tsy afaka hiandry ny taona 2030 ny tsy fisian’ny fandriam-pahalemana sy ny fiakaran’ ny vidim-piainana, izay fandemen-tsaina atao amin’ny Malagasy, satria isanandro dia hiadivana foana izany hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ary izany no tsy mampandroso amin’ izao fotoana izao. Nambaran’ ny Filoham-pirenena amin’ izany fa efa natomboka tao anatin’ny efa-taona izay ny fisandratana, ka noho izany tsy tokony ho diso isika satria “anjaran’ ny filoha no manolotra izany ary tompon’andraikitra avokoa ny rehetra amin’izany fampandrosoana izany, satria tsongaiko izao ny fampiakarana ho avo telo heny ny harin-karena faoben’ny firenena, ka raha 416 Dolara isan-olona izany ankehitriny dia hikatra ho arivo Dolara izany amin’ny taona 203”. Misy ihany koa ny tetikady izay hapetraka isam-paritra ahafahana mahatratra izany, ary tsy tokony hiadian-kevitra ara-politika akory aza. Satria izany no tanjona hoy hatrany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ary hinoako hoy izy fa tsy hisy ny Malagasy handa izany ezaka vita amin’ ny fampandrosoana izany.
Mila fitoniana ny firenena ahafahana manatanteraka hatrany ny asa fampandrosoana raha ny nmabaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fitokanana ny seranan-tsambon’i Toamasina omaly. Efa be loatra ny rà latsaka teto amin’ity firenena ity, ary izany ...Tohiny